आज मन्त्रालय बाँडफाँड, भोलि मन्त्रिपरिषद् विस्तार, को–को बन्दैछन् मन्त्री ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
आज मन्त्रालय बाँडफाँड, भोलि मन्त्रिपरिषद् विस्तार, को–को बन्दैछन् मन्त्री ?
सरकार विस्तारको गाँठो फुकाउन राजनीति दलका नेताहरू छलफलमा जुट्न थालेका छन् । सरकार बनेको डेढ महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा सरकारका कामहरू अलपत्र पर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चार मन्त्री र एक राज्य मन्त्रीको भरमा सरकार चलाइरहेका छन् ।
एमालेबाट विद्रोह गरेको माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउने उद्देश्यले सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार विस्तारमा ढिलाइ गरेको थियो । माधव नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्ता गरेपछि पाँचदलीय गठबन्धनले आगामी बुधवारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ ।
आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकमा बुधबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । बालुवाटारको बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक राखेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ १६ गतेसम्ममा सरकार विस्तार गर्ने तयारी भएको ब्रिफिङ गरेको माओवादी स्थायी कमिटीका एक नेताले बताए ।
गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुनेछन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने बताइसकेको छ । गठबन्धनमा रहेका नेताहरू कुन दलले कतिवटा मन्त्रालय पाउने टुंगो लगाइसकेका भए पनि कुन दललाई कुन–कुन मन्त्रालय दिने भनेर मन्त्रालय बाँडफाँड गरेका छैनन् ।
कांग्रेसले परराष्ट्र मन्त्रालय पाएको खण्डमा नेता डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने सम्भावना छ । पौडेल पक्षबाट पार्टी महामन्त्री शशांक कोइराला, सुजता कोइराला र प्रकाशमान सिंहमध्ये एकलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब देउवामाथि छ ।
माओवादीका शीर्ष नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा लगायतले मन्त्रीमा दोहोरिने इच्छा गरेका छन् । यसका अलावा देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल, हितबहादुर तामाङ, सुदन राईलगायत पनि मन्त्रीका आकांक्षी छन् ।
माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र पम्फा भुसालले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । अब माओवादी केन्द्रले चारवटा मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले मापदण्ड बनाउने
नवगठित दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारमा पठाउने मन्त्री छान्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाललाई दिएको छ । उनी भदौ १३ मा प्रतिनिधि सभामा उक्त दलको नेता चयन भएका थिए । यद्यपि एकीकृत समाजवादीले सरकारमा पठाउने मन्त्री छान्नका लागि मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको छ ।
‘अहिले संगठन बनाउने र जोगाउने बेला हो । पद प्राप्तिका लागि नयाँ दल बनाएको होइन । यो आरोपको खण्डन पनि गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि पनि पदमा धेरै दाबी राख्नुहँदैन’, एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक नेताले भने । प्रेम आले र शेरबहादुर कुँवर दुवै सुदूरपश्चिमका नेता हुन् । उनीहरू दुईमध्ये कुनै एक नेतालाई मन्त्री बनाउने सम्भावना छ ।